Home News Qalbi Dhagax oo diiday in uu ku dhoofo baasaboor Itooobiyaan ah
Qalbi Dhagax oo diiday in uu ku dhoofo baasaboor Itooobiyaan ah
Ka dib markii uu xuriyadiisa dib u helay Mudane Cabdikarin Shiikh Qalbi Dhagax oo mudo dhowr bilood ah ku xirnaa xabsi ku yaal dalka Itoobiya ayaa waxaa dowlad Itoobiya damacday in ay ku soo dhoofiso baasaboor Itoobiyaan ah laakiin waa uu kou gacan seeray.
Waxa uu yiri “Waxa aan ahay muwaadin soomaali waxaana ku dhoofayaa oo kaliya baasaboor soomaali ah”. Waxaa maanta lagu soo dhoofay waraaqda ku meel gaarka ah ee loo yaqaan “go home”. Caawana Waxa uu joogaa magaalada Nairobi isaga oo ku sii wajahan Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Kismanyo oo soo dhawayn wayn loogu sameeyn doono.
Previous articleRW Hassan Cali Kheyre oo beeshiisa ku wareejiyay Isgaarsiintii dalka
Next articleQalbi Dhagax oo kasoo muuqday Baar ku yaala Adis Ababa(SAWIRO)
Daneeyayaasha Soomaalia oo baaq adag u diray Dadka isku haya Siyaasada...